I-Black Rhino Game Lodge - I-Pilanesberg National Park
I-Black Rhino Game Lodge
I-Pilanesberg National Park, eNingizimu Afrika
Ingama khilomitha angu-33 uvela eSun City, ehlathini lasePilanesberg National Park, i-Black Rhino Game Lodge yinto ejwayelekile e-Afrika. I-lodge ikwazi ukufinyelela kwi-Black Rhino Reserve eyisebenzisayo ukuze inzuzo ibe ngendlela yokushayela imoto.
Ukuhlala: ama-suites angu-14 angamahhala
Indawo: Ngasentshonalanga yePilanesberg National Park esifundazweni saseNorth West eNingizimu Afrika
Imisebenzi: Ukushayela kwezemidlalo, ukuhamba kwemidlalo yemfundo, ukubuka izinyoni
Ukuhlala kwakho e-Black Rhino Game Lodge esifundazweni saseNorth West eNingizimu Afrika kuzoziqhayisa imibono yehlathi laseTamboti kanye ne-waterhole esebenzayo. Le safari ihlala eduze kweSun City isendaweni ye-kaleidoscope ehlukile yeKharihari eyomile kanye ne-Lowveld emanzi. I-suites yangasese yokunethezeka ikhululekile futhi ngayinye ine-patio yayo, isimo se-air conditioning, i-designer yokugezela ne-shower yangaphandle kanye nezinsiza zanamuhla.
Phatha indawo yokubuka lapho uthola ikhishi ephezulu ekhishini bese ubona izilwane zasendle phambi kwakho. Jabulela ngokuhamba kancane ehlathini lapho ubona izinhlobonhlobo zezinyoni nezinyoni zasendle. Sebenzisa isikhathi sokudumisa izinsuku zakho nge-pool yokubhukuda komphakathi noma ngokuqala imoto yezemidlalo endle.